बजेटबारे निर्णय गर्न बालुवाटारमा दुई बैठक- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १५, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २०७७/७८ को बजेट पास गर्न लगातार दुई बैठक बस्ने भएका छन् ।
बिहीबार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठक बस्दै छ । लगत्तै २ बजे मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर बजेटकोबारे निर्णय गर्ने तय भएको छ । यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बजेटको ब्रिफिङबारे तय भइसकेको छैन । अघिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रपतिलाई बजेट पेस गर्ने एक दिनअघि अर्थमन्त्रीले ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतका अनुसार बजेटको ब्रिफिङ भनेर अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म समय लिएका छैनन् । बजेटबारे राष्ट्रपतिलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि छैन ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सृजना, कृषिमा यान्त्रीकरण, प्रविधिमा नयाँ कार्यक्रमका साथ बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज दिउँसो ४ बजे खतिवडाले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको सयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य पेश गर्दै छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १२:४८
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा औपचारिक पुष्टि हुन बाँकी
जेष्ठ १५, २०७७ प्रशान्त माली
ललितपुर — ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज (शिक्षण अस्पताल)मा उपचारको क्रममा बुधबार मुत्यु भएका कोरोना भाइरस संक्रमितको शव व्यवस्थापनको तयारी गरिएको छ । बुङमतीका ५६ वर्षीय ती व्यक्तिको शव अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ ।
ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले शव व्यवस्थापन गर्न समन्वय भइरहेको बताए । ‘शव व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मृत्युबारे औपचारिक पुष्टि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यस बारेमा मन्त्रालयमा बैठक भइरहको छ । हामी निर्देशनको पखाईमा छौं ।’
ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङमतीका ती व्यक्तिको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएपछि उनको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ । अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था र सावधानी अपनाइएको छ । किस्ट मेडिकल कलेजको नयाँ भवनको पाँचौ तलाको एमआईसीयू कक्ष सिल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर प्रमुख डा.खगेश्वर गेलालले दिए ।
उनले मृतक परिवारका सबैको विवरण संकलन भइरहेको बताए । ‘मृतकलाई कहाँबाट कोरोना सर्यो ? बिरामी हुनुअघि कहाँ–कहाँ गएका थिए ? सबै विवरण संकलन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ गेलालले भने । मृतकलाई जेठ ११ गते राति अस्पताल ल्याइएको थियो । त्यसक्रममा कोरोना पनि टेस्ट गर्नेक्रममा पोजिटिभ देखिएको हो । उनी कलेजोसम्बन्धी रोगबाट ग्रसित थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ १२:४४